အခါအားလျော်စွာပဲ ကျွန်တော်တို့ Resume တွေ ရေးကြရတယ်။ အလုပ်သစ် လျှောက်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အလုပ်ဟောင်းကနေ အလုပ်အသစ် ပြောင်းတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ Resume ရေးကြရတယ်။ ရန်ကုန်မှာတော့ Resume ကို Curriculum Vitae(CV) လို့ ခေါ်တာ များပါတယ်။ Resume ပဲ ခေါ်ခေါ်၊ CV ပဲ ခေါ်ခေါ်၊ သေချာတာတော့ မိမိက ဒါတွေ ဒါတွေတတ်တယ်။ ဒီ ကျွမ်းကျင်မှုတွေ ရှိတယ်။ ဒါတွေနဲ့ မင်းတို့ ကုမ္ပဏီမှာ ငါ အလုပ် လုပ်နိုင်မယ်လို့ ထင်တယ် ဆိုပြီး မိမိကိုယ်ကို ချရောင်းတဲ့ ကြော်ငြာ စာရွက်ပါပဲ။ Resume ရေးနည်း နိဿရည်း ဆိုပြီး စာအုပ်စာတမ်းတွေလည်း အမြောက်အမြား ရှိပါတယ်။ အင်တာနက် ပေါ်မှာလည်း အလွယ်တကူပဲ ရှာလို့ ရပါတယ်။ သူ့ကျွမ်းကျင်ရာ လုပ်ငန်းဌာနအလိုက် ပိုကောင်းတဲ့ Resume ရေးနည်းတွေ တပုံတပင်ကြီး ရှိနေကြ ပါတယ်။
သို့ငြားလည်း ကျွန်တော်တို့ Resume ရေးကြမယ်ဟေ့ ဆိုရင် ပြဿနာ တက်ပါတယ်။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ Guideline မရှိလို့။ တစ်ယောက်က ဒါမျိုး ရေးတာ ကောင်းတယ် ပြောတယ်၊ နောက်တစ်ယောက်က ဒါမျိုး ရေးမှ ပိုကောင်းတယ် ပြောတယ်။ ကဲ ကျွန်တော်တို့ ဘာကို မူသေ ယူကြမလဲ။ တကယ်တော့ ဘာကိုမှ မူသေ ယူလို့ မရပါဘူး။
ဆိုတော့ မောင်လူအေး အလုပ်လျှောက်တဲ့ Resume လေး မျှဝေချင်တယ်။
မူသေယူလို့ မရဘူးလည်း ပြောတယ် ခင်ဗျား Resume ကရော ဘာမို့လို့လည်း… မေးစရာ ရှိပါတယ်။
ဒီ Resume က အောက်ပါ အရည်အချင်းတွေနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ Resume လေးမို့ပါ….
(မှတ်ချက်။ ။ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များတော့ ပြည့်စုံခြင်း မရှိပါ။)
အလုပ်ခေါ်တဲ့ သူက ပထမဆုံး ဘာကြည့်မလဲ။ ဒီလူနာမည် ဘယ်လိုခေါ်လဲ။ ဘယ်မှာနေလဲ ကြည့်ပါမယ်။
အဲဒီအတွက် ကျွန်တော်တို့ အမည်နာမနဲ့ နေရပ်လိပ်စာ ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာကို အယင် ထည့်ပါမယ်။
အဲဒီနောက် လိပ်စာ ကဏ္ဍပြီးဆုံးပြီ ဖြစ်ကြောင်း မျဉ်းလေး ပိတ်မယ်ဗျာ…. ဒီမှာ ကျွန်တော့ အမည်နဲ့ ဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက် ပြီးဆုံးပါပြီပေါ့။
လျှောက်တဲ့ ရာထူးကို ထင်ထင်ရှားရှားနဲ့ သတ်သတ်မှတ်မှတ် ရေးပါမယ်။ မြင်သာထင်ရှားအောင် တော့ ဖြင့်ရင်…. Bold လေးပါ လုပ်ထားပေးမယ်ဗျာ….
အမည်။ ကျားမ။ အိမ်ထောင် ရှိမရှိ။ နိုင်ငံသား။ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာ။ လူမျိုးနဲ့ မွေးသက္ကရာဇ်။ စသည်… စသည်.. ပေါ့ ဘေးနားလေးမှာ မိမိရဲ့ ပတ်စပို့ အရွယ် ဓာတ်ပုံလေးကို ထည့်ပါမယ်။
အာရိုက်မယ်ပေါ့ဗျာ… ဘယ်လို…. ဘယ်ချမ်းသာ… ဘာညာ သာရကာ နေကြာ ကွာစေ့ပေါ့….
မင်းတို့အလုပ်ကို ငါ ဘာလို့ လျှောက်တာကွ… ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာလေးကို လေသံ ပြင်းပြင်းလေးပေါ့…. ဒီနောက် လုပ်သက်က ဘယ်နှစ်နှစ်၊ မျှော်မှန်းလစာက ဘယ်လောက်၊ ခရီးသွားလာ လိုမှု ရှိမရှိနဲ့ အကယ်၍ ခန့်မယ်ဆိုရင် ဘယ်တော့ အလုပ်စဆင်းနိုင်မယ်ပေါ့ဗျာ…
မိမိ လုပ်ကိုင် ခဲ့ဖူးတဲ့ အတွေ့အကြုံကို အကျဉ်း အရင်ရေးပါမယ်…. ဘယ်နှစ်ခုနှစ်ကနေ ဘယ်နှစ်ခုနှစ် အထိ ဘယ်မှာ လုပ်ဖူးတယ်ပေါ့….
အဲဒီ အချက်အလက်တွေကို တစ်ခုချင်း ဘယ်ရာထူးအတွက် ဘာလုပ်ရတယ်ပေါ့… မောင်လူအေး ရေးထားတာ ပြည့်စုံလှချည်လား မမေးပါနဲ့။ မောင်လူအေးလည်း ကိုယ်လုပ်ရတာ ကိုယ်ရေးကွာ ဆိုရင် လုပ်ဖူးတာပဲ ရှိတယ်။ ဘယ်ကနေ စရေးရမယ်မှန်း မသိပါဘူး။ ကဲ… ဒါဆို ကိုယ့်ဆရာ ဘယ်ကရတုံး… မေးစရာ ရှိပါတယ်။ လွယ်ပါတယ်ဗျာ… ကိုယ်အယင် လုပ်ခဲ့ရတဲ့ ရာထူးမျိုး ခေါ်ထားတဲ့ အလုပ် ကြော်ငြာတွေ ရှာဗျာ… အဲဒီ ထဲကနေ ကူးချလိုက်…
အဲ ကူးချဆိုလို့ တည့်ကြီးတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ… နည်းနည်းလေးတော့ ဖောရွှေတော့ လုပ်ပေးရဦး မှာပေါ့… အနည်းအကျဉ်း ကတော့ ကိုယ်လုပ်ဖူးတာနဲ့ ပြန်ကိုက်ညီအောင် ပြန်ပြင်ရမှာပေါ့…
အဲလို ကူးချတော့ အလုပ်ခန့်မဲ့ ကုမ္ပဏီက သိနေရင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ… ဟုတ်လား… ဖတ်နေရင်း တွေးမိ လိုက်သလားလို့… ဟုတ်တယ်ဟုတ်….
စိတ်မပူပါနဲ့ဗျာ… အဲဒါတွေ ခင်ဗျား ရေးချင် သလောက်သာရေး… ခန့်တဲ့ ကုမ္ပဏီက ဖတ်ကို မဖတ်တာဗျိုး…. စိတ်မပူနဲ့…
မဖြစ်ဘူးဗျ… Resume အင်္ဂါရပ်နဲ့ ပြည့်မီအောင်တော့ ရေးပေးရတယ်။
နံပတ် ရှစ် …
အနေနဲ့ကတော့ တက်ခဲ့ဖူးတဲ့ အမိ တက္ကသိုလ်များ စာရင်းပေါ့။ ဒါလည်း လိုတယ်ဗျ… မောင်လူအေး ရေးထားတဲ့ Resume ဖတ်ပြီး ပြောတယ် တစ်ယောက်က။ မင်းဟာ ဆယ်တန်းထိ တက်ခဲ့တာ လိုလို့လားတဲ့။ လိုတယ်တော့ ဘယ်ဟုတ်မလဲဗျာ။ ထည့်ရေးတော့လည်း တရားမှ မစွဲတာ ရေးပေါ့။
အကယ်၍များ တက္ကသိုလ်အပြင် MCC မှာ တက်ခဲ့တာတို့ KMD မှာ တက်ခဲ့တာတို့ ပါရင်တော့ Non-Academic မှာ ထည့်ပေါ့ဗျာ…
မိမိ ပါဝင် ပတ်သက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ပလုံဖက်ရှင်နယ် အဆိုစီအေးရှင်းပေါ့ဗျာ…. ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းမှာ စည်းရုံးရေးမှုး ပေါ့ဗျာ…. ဟုတ်တယ်ဟုတ်…. ဟ ဟ ဟ …
အမှတ်စဉ် ၁၀ …
အမှတ်စဉ် ၁၀ …ကတော့ ဘာသာစကားပေါ့… မြန်မာစကား Excellent ပေါ့ဗျာ… ဒါကတော့ အမှတ်ပြည့်ပဲ…
ခင်ဗျား တတ်တဲ့ ကွန်ပျူတာနဲ့ ပတ်သက်တာတွေ အကုန်သာထည့်ဗျို့… Certificate ရမှ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ… ထည့်သာ ထည့်ပစ်…
ခင်ဗျားရဲ့ ရှေ့ကုမ္ပဏီက ဘိုးတော် ဘွားတော်များ စာရင်းပေါ့… ဒါလည်း စိတ်ပူစရာမရှိပါဘူး။ ခင်ဗျား ထည့်ရေးချင်တာသာ ရေးလိုက်။ ဘယ်သူမှ အချိန်ကုန်ခံ ဆက်သွယ်မနေဘူး။
အဲလိုနဲ့ နံပတ်စဉ် ၁၂ ခု တပ်ပြီး ရေးချပြီးတဲ့ သကာလ Resume ရေးခြင်း ကဏ္ဍ နိဂုံး ကမ္မ အဆုံးသတ် ပါပြီဗျာ…
အဲဒီ Resume လေးကို အလုပ်ခန့်မဲ့သူ နေရာကနေ ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဗျာ…
ဦးဆုံး Resume တစ်ခုကို စကြည့်ရင် နာမည်ဘယ်လိုခေါ်တယ်၊ ဘယ်မှာ နေတယ်ကို စကြည့်မယ်ဗျ။ ပြီးရင် ဘယ်ရာထူးအတွက် လျှောက်ထားတယ် ဆိုတာရယ်၊ လျှောက်ထားသူရဲ့ Particulars နဲ့ ဓာတ်ပုံကို အကြမ်းဖျဉ်း ကြည့်မယ်ဗျာ။
အဲဒီနောက် အရေးကြီးဆုံး အချက် ဒီရာထူး အတွက် မျှော်မှန်းလစာ ဘယ်လောက်၊ အတွေ့အကြုံ ဘယ်နှစ်နှစ် ရှိတယ် ဆိုတာကို ကျော်ဖတ်ရောဗျို့။ အဲဒီအချက်က Resume တစ်ခုလုံးရဲ့ အဓိက အဆုံးအဖြတ်ပါပဲ။ အဲဒီ Resume ထိပ်ကနေ မျှော်မှန်းလစာ အထိ ကြည့်လို့မှ သူတို့ ပေးနိုင်တဲ့ လစာနဲ့ ကိုက်ညီမှု မရှိဘူးဆိုရင် ကျန်တာ ဆက်ကို မဖတ်ကြ တော့တာပဲ။
ရံဖန်ရံခါမှာ ရှိပါတယ်။ လျှောက်ထားသူရဲ့ အရည်အချင်းနဲ့ အတွေ့အကြုံက အရမ်းကောင်းနေတယ်။ သို့ပေမဲ့ ကုမ္ပဏီက ပေးနိုင်တဲ့ လစာနဲ့ လျှောက်ထားသူ တောင်းတဲ့ လစာနဲ့ အရမ်းကွာနေရင် လျှောက်ထားသူရဲ့ အရည်အချင်း ဘယ်လောက်ပဲ ကောင်းပါစေ။ ခန့်လို့မရတဲ့ အတွက် ရွေးချယ်မှုထဲ ထည့်လို့ကို မရတော့တဲ့ အနေအထားတွေ ကြုံရ တတ်ပါတယ်။
လျှောက်ထားတဲ့ ရာထူးနဲ့ ပေးနိုင်တဲ့ လစာနဲ့ ကိုက်တယ်ဆိုရင် အဲဒီ Resume ကို ထပ်ပြီး Details ဆက်ဖတ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့မှ ဒီလူ ဘာဘွဲ့တွေ ရထားတယ်။ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံက ဘယ်ကုမ္ပဏီမှာ ဘယ်နှစ်နှစ် လုပ်ဖူးတယ် ဆိုတာတွေကို ဆက်ပြီး လေ့လာသမှု ပြုပါတယ်။
Resume တစ်ခုမှာ ကို့ရဲ့ Particulars အားလုံးကို ခြုံငုံ မိနိုင်အောင် ရေးဖို့ လိုတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ အရမ်း Details ကျအောင် ရေးရမယ်ဆိုတာ မှားပါတယ်။ Details ကို အင်တာဗျူးခေါ်တဲ့ အချိန်မှာ ဆက်လက် ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
ွResume ကို လှချင်ဇောနဲ့ Fonts တွေ တပုံတပင်နဲ့ အလှဆင်တတ်ကြတာ။ ဒါလည်း မလိုအပ်တဲ့ အချက်တစ်ခုပါပဲ။ Resume တစ်ခုမှာ Font တစ်ခု ကို သုံးရင် လုံလောက်ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ နေရာမှာ အထူးပြုချင်တာကို Italic လုပ်တန်တာ လုပ်၊ Bold လုပ်တန်တာ လုပ်ရင် လုံလောက်နေပါပြီင်္။
Expected Salary ကို ဘာမှ ထည့်မရေးဘဲနဲ့ Negotaible လို့ ထည့်ရေးတတ်ကြတာ။ မိမိကိုယ်ကို ဘယ်လောက် ထိုက်တန်တယ်လို့ ထည့်မရေးထားတဲ့ သူတစ်ယောက်ရဲ့ Resume ကို တော်ရုံတန်ရုံသော အလုပ်ခန့်ထားသူ တစ်ဦးက စိတ်ပါဝင်စားစွာ ဖတ်ရှုစေဖို့ ဆွဲဆောင်အား တော်တော်ကို နည်းတာ တွေ့ရပါတယ်။
Certificate တွေ၊ ဘွဲ့လက်မှတ်တွေ ထည့်ပေးစရာ မလိုပါဘူး။ ကိုယ်ပို့တဲ့ Resume က Email နဲ့ Attached လုပ်ပြီး ပို့မှာ ဆိုတော့ကာ သက်ဆိုင်ရာ Email Service Provider တွေရဲ့ File Size Limit ကိုလည်း သိထားဖို့ လိုတယ်ဗျ။ ဥပမာ စင်္ကာပူဆိုရင် အများဆုံး အီးမေး တစ်စောင်ရဲ့ အကြီးဆုံး ဖိုင်အရွယ်အစားကို ၁၀MB ထိပဲ ခွင့်ပြုတယ်ဗျာ။ ဆိုတော့ ကိုယ်ပို့တဲ့ Email က ၁၀MB ထက်ကျော်နေမယ် ဆိုရင် လက်ခံတဲ့ Email Hosting က ခွင့် မပြုရင် ခင်ဗျား Email ရောက်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဆိုတော့ကာ… မိမိကိုယ်ကို ချရောင်းတဲ့ ကြော်ငြာစာရွက်လေးကို အကောင်းဆုံး အသေသပ်ဆုံးနဲ့ သူများ ဖတ်ချင့်စဖွယ် ဖြစ်စေအောင် ရေးသားပြီး ပေးနိုင်မယ် ဆိုရင်တော့ဖြင့်… ဖတ်ရှုသူရဲ့ စိတ်ကို မြင်ရုံနဲ့ ဆွဲဆောင်နိုင်ပြီးသား ဖြစ်စေမှာ ဖြစ်ပြီး အလုပ်ခန့်မယ် မခန့်ဘူးဆိုတဲ့ Interview ကို ရောက်တဲ့ခါ ကျရင်လည်း မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ပြည့်ဝစွာနဲ့ ဖြတ်ကျော် အောင်မြင် နိုင်စေဖို့ အထောက်အကူ ပြုစေမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း…
ပုံတွေက အရမ်းသေးနေတယ်။ ဖတ်မရဘူး ဖြစ်နေမယ်။ ဒါဆိုရင် Right Click ခေါက်ပြီး View Image ဖြစ်စေ၊ Save Image (သို့) Save File ချပြီး ဖတ်ရှုနိုင်ပါကြောင်း...
Filed Under : Career, Resume Preparation
My web site http://launchpad16.com/blogs/entry/Spanish-Property-The-Facts-We-Need-To-Know-2013-05-16-1
Thank you, I've just been searching for information approximately this topic foralong time and yours is the greatest I've found out so far.
Feel free to visit my site :: http://comunidad.aprendiendo.Net.co/
I was very pleased to find this net-site.I wished to thanks
on your time for this glorious learn!! I undoubtedly enjoying every
My blog post :: amherstblock.com
My web-site - http://surfz-up.com/
Also visit my web site ... socialbizconnect.com
Also visit my website; indimusic.tv
easiest factor to have in mind of. I say to you, I certainly get annoyed at
the same time as other folks think about concerns that they just don't realize about. You
whole thing without having side-effects , other folks could takeasignal. Will likely be again to get more. Thank you
Look into my blog :: www.oilsandsnetwork.ca
Review my web page: website.kamsgraphics.com
My web blog download counter strike 1.6
..... see more : dojo me